Linda ngaphezulu, faka i-iOS 10 ngoku ngesi sifundo | IPhone iindaba
Musa ukulinda kwakhona, faka i-iOS 10 ukusukela ngoku kwesi sifundo
IOS 10 yinguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza ye-Apple eya kuthi ifike nge-13 kaSeptemba, nangona kunjalo, sele uyazi ukuba siyathanda ukuqhubela phambili iminyhadala, ke siza kukufundisa indlela yokufaka i-iOS 10 ngqo kwisixhobo sakho se-iPhone ngaphandle ndilindile. Ngale nto siza kudinga uthotho lwezixhobo kunye neemfuno ezingayi kuba lula kwaphela ukufezekisa, kodwa ukuba uyahlangabezana nazo zonke, ungaqala ukonwabela i-iOS 10 kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kwabanye abasebenzisi. Sukulinda ngaphezulu, faka i-iOS 10 ukusukela ngoku ngesi sifundo silula sikulethela sona.
Njengamaxesha onke, ngaphambi kolu hlobo lomsebenzi kwaye ukuba sinesixhobo kwikhulu leepesenti ezisebenzayo, sicebisa ukuba wenze ukhuphelo lwefowuni yakho, kunye nokugcinwa kwengxoxo zakho kuWhatsApp ukuba usebenzisa usetyenziso. IpheUkwenza ugcino lwefowuni kwaye kuba siza kusebenzisa iMac ngendlela efanayoNdicebisa ukusetyenziswa kweTunes, siza kwenza ugcino oluntsonkothileyo, ukuze sikwazi ukugcina ulwazi oluninzi kangangoko kunokwenzeka, utshintsho luya kuba lincinci kwaye asisayi kuphulukana nayo nantoni na. Backup nge iTunes kuthatha imizuzwana embalwa kwaye yeyona ndlela ikhawulezayo nekhuselekileyo.
Ngakolunye uhlangothi, ukuncedisa izingxoxo kuWhatsApp: Siza kuya kwicandelo leseto ngaphakathi kwesicelo se-WhatsApp. Enye yeemenyu ibizwa ngokuba yi "Chats", ngaphakathi kwale menyu siza kufumana umsebenzi "wokugcina incoko" kwaye sinokwenza ikopi yogcino ngalo mzuzu, nanini na sifuna, eya kugcinwa kwi-iCloud emva koko sinokubuyisela ngokulula xa Masiphinde sifake isicelo kwaye sidibanise nenombolo yethu yefowuni.
1 Ukulungiselela, ukukhuphela iXcode 8 GM
2 Khuphela amakhonkco kwiinguqulelo ze-iOS 10
3 Ukufaka i-iOS 10.0.1 kwi-iTunes
Ukulungiselela, ukukhuphela iXcode 8 GM
Uninzi lwenu luya kuyazi kwaye abanye abayi kuyazi, kwaye yinto yokuba GM ye-iOS 10, eyaziwa njenge-iOS 10.0.1, ayinakufakwa ngendlela yesiqhelo ngeTunes, kuba oku siza kuyidinga iXcode 8, inkqubo yeApple ethi iyafumaneka kuphela kwiinkqubo ezisebenza nge-macOS. Lo nto, masiye kwiwebhusayithi ekhutshelweyo yeXcode 8 kule LINK. Okokuqala, khumbula ukuba iakhawunti yethu yomsebenzisi we-beta iya kuthi isibuze, kodwa ungakhathazeki, ukuba asinayo singayenza ngokulula kwangoko. Ngamafutshane, siyaqhubeka nokukhuphela i-Xcode 8, kwaye silumke, kuba zii-4,4GB zento.
Emva kokukhutshelwa, siya kufaka ngendlela eqhelekileyo Xcode, Njengayo nayiphi na enye ifayile ye .dmg. Umonde yinto esiya kuyidinga, ngaphezu kwayo nantoni na. Kodwa ungaphelelwa lithemba, kwimizuzu embalwa iyakufakwa kwaye siya kuqhubeka nenkqubo yesiqhelo, oko kukuthi, ngeTunes, kuya kufuneka sibeke iXcode 8 ngaphambili.
Khuphela amakhonkco kwiinguqulelo ze-iOS 10
Ngoku sifuna into, inkqubo yokusebenza esifuna ukuyifaka. Ngale makhonkco Unokuzikhuphelela nganye kwiinkqubo eziza kuhambelana nesixhobo sethu.
I-iPhone 6s / i-iPhone 6
I-iPhone 6s Plus / i-iPhone 6 kunye
I-iPhone 5c / i-iPhone 5
Ukufaka i-iOS 10.0.1 kwi-iTunes
Ukusuka apha siza kulandela inkqubo efanayo njengamaxesha onke, amanyathelo athile alula aya kusivumela ukuba sonwabele zonke izibonelelo ze-iOS 10 kwimizuzwana embalwa, ukuba ulandele amanyathelo kwileta.
Sivula iTunes kwi-Mac yethu
Siplaga isixhobo sethu se-iOS ngokuKhanyisa esifuna ukusibuyisela kuhlobo lwe-10.0.1
Siza kubamba iqhosha «yonke into»Ukusuka kwikhibhodi ye-Mac yethu ngelixa kunye nemouse sikhetha ukhetho«buyisela i sixhobo«
Imenyu yokuhlola iya kuvulwa, apho siza kujonga kwifolda yethu yokukhuphela kwifayile ye-.IPW ehambelana nohlobo lwesixhobo sethu ebesikukhuphele ngaphambili
Ukufakwa kuya kuqala
Yindlela elula yokufaka i-iOS 10 GM kwi-iPhone yethu. Siyakhumbula ukuba i-GM ikwayinguqulelo efanayo esiza kuyibona ngomhla we-13 ivela ngokusemthethweni kwizixhobo, kwaye xa sele ifakiwe akusayi kubakho mfuneko yokufaka enye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Musa ukulinda kwakhona, faka i-iOS 10 ukusukela ngoku kwesi sifundo
Kakhulu!!! Ndiya kuyenza loo nto !!! Kwaye xa u-10.1,10.2, njl ... uya kutsiba uhlaziyo nge-OTA ??? Enkosi!!!
Ewe, ngokungathi ubunenguqu yokugqibela.
Ngaba kuluncedo ukufaka ezinye iinguqulelo?
Imemori engakanani "edliwayo" kwi-iPhone ye-16G? IOS 9 indishiya ndedwa 11.8! Ungabi mbi kwaye le itya imemori engaphezulu
Olu hlaziyo lushiya i-12.12GB kum. Ukubulisa.
Enkosi mhlobo, ndilibele ukutsho ukuba ikwi-6s ndiyathemba ukuba iyafana neyakho
Malunga ne-2,8GB yemibuliso.
Phendula kuloo nto
Ndinayo kwi-ipad kunye nenkqubo ye-apple beta.
Kulula kangakanani ukufaka iprofayili ye-beta kunye nokuhlaziya nge-OTA ngaphandle kwekhompyuter!
Injongo asikokuhlaziya, kodwa kukubuyisela uPedro.
Ndine-10 GM efakiweyo kwaye iibugs sele ziqatshelwa, izaziso ezintsha ze-imeyile azivakali, izaziso zezicelo zomntu wesithathu (whatsapp) azibonakali kwi-iwatch ... kunye nezinye izinto, ndiyathemba ukuba bazaku kungekudala ufumane isiziba sezinto azibalulekanga, kungenjalo ndiyayithanda ios 10 entsha!
Akukho app kaWhatsApp yokubukela…
UPablo Jimenez Saez sitsho
ayizukundivumela ukuba ndenze iziphu, i-xcode… iyanceda
Phendula Pablo Jimenez Saez
Mnu_edd hernandez sitsho
Ewe ndinayo i-GM kwi-iPad, bendinayo yonke i-betas, kwaye andiziva ngathi yahluke kakhulu kwi-betas yangaphambili endiyithethayo, loluphi utshintsho olukhulu ngakumbi okanye nayiphi na into, kwi-iPhone ... Kulungile akukho nto yokulinda nje iintsuku ezintathu (4) Ukuhlaziywa kwe-Apple TV kuya kufumaneka ngaloo mini?
Phendula Mr_edd hernandez
Molo, yintoni ukusetyenziswa kokukhuphela inkqubo yeXcode 8 ukulayisha i-GM kwi-iPhone yam?
USawule arias sitsho
Inokwenziwa ngewindows okanye yenzelwe iMAC kuphela
Phendula uSawule Arias
Ndingayigcina i-ipsw GM kwaye ndiyifake kwi-13th ngokusebenza kwesiqhelo kweapile?
Intlawulo yemizuzu eli-15 yee-AirPod iya kusinika iiyure ezi-3 zomculo
Iipuzzle zeJigsaw Wonder Kittens zaBantwana simahla ixesha elilinganiselweyo